फाल्गुनन्द गोल्डकप : को बन्ला सर्वोत्कृष्ट खेलाडी ? | Hamro Khelkud
फाल्गुनन्द गोल्डकप : को बन्ला सर्वोत्कृष्ट खेलाडी ?
सोमवार, पौष ३०, २०७५
दिपक बाहोरा, पाँचथर
दशौं रुस्लान फाल्गुनन्द गोल्डकपको उपाधिको लागी त्रिभुवन आर्मी क्लब र झापा ११ फुटबल क्लब प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । आज दिउँसो २ बजे फिदिम माविको खेलमैदानमा हुने फाइनल खेलले दशौं संस्करणको विजेताको टुङ्गो लगाउनेछ । फाइनल खेलको लागी तयार रहेको दुवै टिमका प्रशिक्षकहरुले जानकारी दिएका छन् ।
प्रतियोगिताको फाइनलसँगै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले पाउने यमाहाको मोटरसाइकल कसले पाउँछ भन्ने तातो बहस पनि सुरु भएको छ । फाल्गुनन्द गोल्डकपको दशौं संस्करणको सर्वोकृष्ट खेलाडीको बन्ला भन्ने विषयमा फुटबल दर्शक, विश्लेषकलगायतसँगको कुराकानीमा तयार पारिएको सम्भावित विजेता:
१. कर्ण लिम्बु – झापा ११
झापा ११ का स्ट्राइकर कर्ण लिम्बु मोटरसाइकल पाउने सम्भावित खेलाडी हुन । उनले यो प्रतियोगितामा चार गोल गरी सकेका छन् । सर्वाधिक गोलकर्ताको होडमा रहेका कर्ण मोटरसाइकल पाउन सक्ने सम्भावित खेलाडी हुन् । कर्ण लिम्बु प्रतियोगितामा एक पल्ट म्यान अफ दि म्याच समेत बनेका छन् ।
२. देवेन्द्र तामाङ – झापा ११
राष्ट्रिय टिमका समेत सदस्य रहेका देवेन्द्र तामाङ पनि उत्कृष्ट खेलाडीको होडमा छन् । यो प्रतियोगितामा निकै राम्रो खेल प्रर्दशन गरी रहेका देवेन्द्र एक पल्ट म्यान अफ दि म्याच बने । सेमिफाइनलमा जित्नै पर्ने खेलमा उनले गोलको अवसर समेत बनाएका थिए ।
३ दिलेन लोक्तान – झापा ११
झापा ११ का डिफेन्डर दिलेन लोक्तनले पनि प्रतियोगितामा राम्रो प्रर्दशन गरी रहेका छन् । उनले कर्ण सिं सोनमा स्मृती क्लब संगको खेलमा एक गोल गरेका थिए । सेमिफाइनलमा उनी म्यान अफ द म्याच समेत बनेका थिए ।
४.युद्ध शाहि – त्रिभुवन आर्मी
त्रिभुवन आमीलाइ फाइनल सम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भुमिका निवार्ह गर्ने आर्मीका कप्तान युद्ध शाहिले जारी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् । आर्मीले उनकै प्रेरणाले फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको हो ।
५.करण राई (रोयल फुटबल क्लब दार्जिलीङ)
रोयल फुटबल क्लबका फरवार्ड करण राई जारी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेल प्रर्दशन गरेका थिए । प्रतियोगितामा २ गोल समेत गरेका राईले रोयललाई सेमिफाइनलसम्म पुर्याएका थिए । सेमिफाइनल पराजित भएपनि उनको प्रदर्शन उत्कृष्ट थियो ।